छोरोलाई फाँसी दिने कि बलात्कारी बन्नबाट बचाउने ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
छोरोलाई फाँसी दिने कि बलात्कारी बन्नबाट बचाउने !
साउन १४, २०७५ सोमबार १७:९:१ | मिलन तिमिल्सिना
कञ्चनपुरकी एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले सडकदेखि सदनसम्म तताएको छ । हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन भएको छ । सदनमा सांसदहरुले यही विषय उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसददेखि प्रदर्शनकारीसम्मले हत्यारालाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । कसैकसैले त बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ पनि भनिरहेका छन् ।
बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने माग यसअघि पनि उठ्दै आएको हो । कतिपय देशमा बलात्कारीलाई फाँसी दिने गरिन्छ । नेपालमा फाँसीको सजाय दिने व्यवस्था छैन । अवोध बालिकालाई बलात्कारपछि निर्मम ढंगले हत्या गरेको घटना सुन्ने र देख्ने सबैलाई लाग्छ, अपराधीलाई यसैगरी फाँसी नै दिनुपर्छ । कुटीकुटी मार्नुपर्छ । तर बलात्कारीलाई फाँसी दिने देशहरुमा पनि बलात्कारका घटना कम भएका छैनन् ।
घरपरिवार र स्कुलले उसका हरेक गतिबिधि नियाल्दै उसलाई शिक्षा र सही मार्ग निर्देशन दिने हो भने उसले कहिल्यै पनि मनमा खराब भावना पाल्न सक्दैन । त्यसैले एउटा पुरुषलाई भोलि बलात्कारी बन्न नदिन उसलाई बाल्यकालदेखि नै घरपरिवार र स्कुलले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कञ्चनपुरको पछिल्लो घटना त एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालमा हरेक दिनजसो कुनै न कुनै ठाउँमा किशोरी तथा बालिकाहरु बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित छन् । यस्ता घटनामध्ये केही मात्र सार्वजनिक हुन्छन् । यस्ता धेरै घटना समाजमा बेइज्जती हुने डरले पीडित र परिवारले लुकाएर राख्छन् ।
नेपालमा बलात्कारीलाई फाँसी नै दिने व्यवस्था नभए पनि दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन छ । कतिपय दोषीले कारबाही भोगिरहेका पनि छन् । तर कानुन र कारबाहीले मात्र यस्ता घटना कम हुन सकेका छैनन् । महिला अधिकारकर्मीलगायत विभिन्न संघसंस्थाले चलाएको अभियान पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यले आफ्नो कर्तव्य र भूमिका त्यही ढंगले निभाउन नसकेसम्म यस्ता घटना कम हुने छाँट पनि देखिँदैन । एउटा पुरुषलाई बलात्कारी बन्न नदिन घरपरिवार, उ आफैं, समाज र राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसबाहेक पढेलेखेका र शिक्षित व्यक्तिहरुबाट पनि बालिका र किशोरी यौनजन्य हिंसाबाट पीडित हुन्छन् । माया गरेको निहुँमा बालिका र किशोरीलाई चिमोट्ने तथा चुम्बन गर्ने क्रियाकलापलाई सामान्य मानिन्छ । तर यौन मनोविश्लेषक फ्रायडले भनेका छन्, ‘केही मानिस यस्ता हुन्छन्, जसले केटाकेटीलाई गर्ने प्रेमको माध्यमबाट मानसिक बलात्कारको आनन्द भोगिरहेका हुन्छन् ।’ यस्तै मानसिक विकार बढ्दै जाँदा बालिका र बृद्धा समेत बलात्कारमा पर्न सक्छन् ।
त्यसैले एउटा पुरुषलाई बलात्कारी बन्नबाट रोक्न दण्ड, सजाय मात्रै पर्याप्त छैन । उसलाई बाल्यकालदेखि नै शिक्षा, चेतना, आचरण र अनुशासन सिकाउन जरुरी छ । एउटा बालक परिपक्क नहुँदासम्म उसलाई रेखदेख र असल मार्गमा हिँडाउने पहिलो दायित्व परिवारको हो । उचित शिक्षा, असल चालचलन र बानीव्यहोरा, अनुशासन लगायत असल चरित्र हुन आवश्यक सबै कुरा परिवारबाट पाउनुपर्छ ।
त्यसपछि नैतिक शिक्षा र आचरणका थप पाठ उसले स्कुलमा सिक्छ । घरपरिवार र स्कुलले उसका हरेक गतिबिधि नियाल्दै उसलाई शिक्षा र सही मार्ग निर्देशन दिने हो भने उसले कहिल्यै पनि मनमा खराब भावना पाल्न सक्दैन । त्यसैले एउटा पुरुषलाई भोलि बलात्कारी बन्न नदिन उसलाई बाल्यकालदेखि नै घरपरिवार र स्कुलले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मनोवैज्ञानिक डा. विलसनको यही भनाईअनुसार सबै पुरुषमा यत्तिको सोचाई हुने हो भने समाजमा बलात्कारका घटना नै हुन पाउँदैन । यसका लागि नागरिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, यौन शिक्षा र मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यक छ ।
यौन अनुशासनको पहिलो पाठशाला पुरुषको परिवार हो । परिवारले नै आफ्नो छोरोलाई बलात्कारी बन्न र छोरीलाई बलात्कृत हुनबाट जोगाउन सक्छ । अनि राज्यले शिक्षा र चेतनामा लगानी बढाउँदै गरिबी र बेरोजगार हटाउने हो भने पनि बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध हुन पाउँदैन ।